Mashaariicda Suuqgeynta ee ka soo horjeedka Geedi socodka | Martech Zone
Mashaariicda Suuqgeynta ee ka soo horjeedka Geeddi-socodka
Jimce, Maarso 2, 2012 Douglas Karr
Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheennu waxay u baahan yihiin xoogaa dib-u-waxbarasho markii aan kor saarno. Waxay u barteen inay lashaqeeyaan iibiyayaashooda suuq sida ay ugu dukaameystaan ​​raashinka. Waxay rabaan inay wax soo saaraan, qiimeeyaan oo ay wax iibsadaan. Waxaan sameynay suuq geyn mashaariic waagii hore runtiina waanu ka xishoonay hada. Ilaa aynaan qiimeyn karin mashruuc aan ku qancineyno dhowr jeer, waxaan caadi ahaan ka fogaaneynaa heshiiska. Annagu, taa beddelkeeda, waxaan la shaqeynaa macaamiisheenna si joogto ah si loo abuuro habab suuq-geyn ah.
Dhibaatadu waxay tahay in hirgelinta suuqgeynta ay aad iyo aad u kala duwan tahay. Adigu ma iibsanaysid adeege, waxaad dejineysaa istiraatiijiyad ku saleysan ilaha iyo natiijooyinka. Suuqgeyntu waa a diyaar, dab, ujeed istaraatijiyad. Si loo helo faham ku saabsan saameynta mashruuca suuq geynta, waa inaad fulisaa oo aad bilowdaa inaad aragto natiijooyinka. Waxba igama gelin taas taasi waa degel naqshadeyn, barnaamij suuqgeyn email ah, ama waa uun naqshad sameynta.
Tusaale ahaan, markaan naqshadeynayno shaxanka, waxaan soo jeedineynaa naqshad leh qabyo dhab ah si aan u tusno macaamilka shaqada farshaxanka iyo qaabeynta. Haddii ay jecel yihiin, waxaan markaas dhex mari doonnaa dhowr jeer oo la soo koobay nuxurka si loo hubiyo inay u sheegayso farriinta saxda ah. Kaliya markaan helno aqbalaad buuxda oo xaqiiqooyinkeena laxaqiijiyo lana diiwaangeliyo ayaan sii deynaa macluumaadka. Sidoo kale kuma dhaleeceyno degel kasta… waxaan ka bilaabi doonnaa gudaha, waxaan hubin doonnaa inaan leenahay qaab aan ku cabbirno saameynta, aan u daawanno natiijooyinka, ka dibna aan u bilowno dhiirrigelintiisa. Diyaar, dab, ujeed.
Markaan macmiil kala shaqeyno iskudhafka mashiinkooda raadinta, waan sameyn laheyn marna weydiiso inay saxeexaan qandaraaska ereyada muhiimka ah. Waxaan xoojineynaa barnaamijka iyo waxyaabaha ku jira (diyaar), markaa waxaan fulinnaa istiraatiijiyadda adoo bilaabaya goobta (dabka), ka dibna waxaan u kuur galeynaa sida bogga loo calaamadeeyay iyo ereyada muhiimka ah ee sida ugu fiican u beddelaya… oo aan dib ugu cusbooneysiinay iyaga (Ujeedada).
Waan jecel nahay taariikhaha la bartilmaameedsanayo, laakiin waxaan aragnaa inay yimaadaan oo ay la socdaan macmiil kasta. Macaamiisha badankood waxay garwaaqsadaan in isbeddelo dheeri ah iyo hagaajin ay dhici doonaan sidaa darteed taariikhda bartilmaameedku aysan ahayn xariiq dhammaad ah, waa xawaare badan. Macaamiisha qaar, inkasta, waxay jecelyihiin inay riixaan taariikhda… iyagoon waqtiga ilaalinaynin kheyraadka ama waxay codsadaan isbadal dheeri ah… AMA isbedelka suuqa iyo ololaha wuxuu ubaahan yahay dib u habeyn xoogaa ah. Weli macaamiisha kale waxay u dhiibaan 'ol "Aan ka adkaanno waxyaabaha ka sii baxa iibiyaha si aan isugu dayno inaan lacag badan uga saarno xiriirkan"… waxaan baranay cayrinta macaamiishaas.
Furaha si guul leh loogu horumariyo geeddi-socodka suuq-geynta wanaagsan waa in la dhaq-dhaqaaqo oo loo dhaqaaqo sida ugu dhakhsaha badan Diyaar, dab, ujeed. Diyaar, dab, ujeed. Diyaar, dab, ujeed. Aqoonsiga in dhammaan qaybaha ay socdaan iyo waxay u baahan tahay isku dheelitirnaan jilicsan si loo helo istiraatiijiyad suuqgeyn ah oo guuleysata. Haddii aad horumariso istiraatiijiyad xagga hore iyo xagga dambe, ku maalgeli waqtigaaga iyo lacagtaada oo dhan, adigoon awood u lahayn inaad la qabsato wax soo saarka marka ay wax si khaldan toos ugu socdaan.
B2B Faahfaahin iyo Prospecting leh Mintigo
Rant: Suuqa Burcad Badeedka ee Online-ka ah